Maraykanka oo Madaxda dalka ugu baaqay in ay si degdeg ku xalliyaan khilaafaadkooda, lana dhameystiro Doorashooyinka | Weheliye Online
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in ay si degdeg ah loo dhammaystiro geeddi socodka doorashooyinka Soomaaliya ee haatan socda.
Warsaxaafadeed ka so baxay wasaaradda arrimaha dibbada dalka Maraykanka ayaa lagu sheegay in khilaafka u dhexeeya Madaxweyne Farmaajo iyo R/wasaare Rooble uu halis ku yahay inuu sii adkeeyo geeddi socodka doorashada, loona baahan yahay in si degdeg ah oo nabad ah lagu xaliyo.
Maraykanku wuxuu weli ka welwelsan yahay in doorashooyinkan ay mar hore dib uga dhaceen xilligii loo qorsheeyay islamarkaana uu dib-u-dhac kasta oo dheeraad ah uu kordhinayo suurtagalnimada in dalku cagaha la galo rabshado.
Previous articleShirkii Madaxda dowlad goboleedyadu isugu imaan lahaayeen magaalada Garowe oo sabab la yaab leh u baaqday.
Next articleDoorashada Aqalka sare ee Maamulka Hirshabeelle oo hakad ugu jirta khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa